Ndị na-eme njem nlegharị anya n'Africa na-egosi akara afọ abụọ gara aga
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Ndị na-eme njem nlegharị anya n'Africa na-egosi akara afọ abụọ gara aga
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
ncube ya na ndi osote minista na Tanzania
Ndị njem njem nlegharị anya nke Africa na-eme emume afọ abụọ ka ọmalichara nkụba nwayọ ya na iwebata ya n'okirikiri njem njem ụwa n'oge World Travel Market (WTM) na London 2019. Nzukọ a nwere nzukọ izizi ya na Nọvemba 5, 2019. Ime emume a ga-abụ a ndụ iyi.ụzọ ihe omume taa. Iji denye aha ebe a .
Mgbe mmalite na iwebata na nlegharị anya ahịa ahịa ụwa na isi mmalite azụmaahịa, ATB nwere ihe ịga nke ọma ịchịkọta wee jikọọ ndị ọkachamara na-eme njem nleta site na ngalaba dị iche iche iji tụlee ma kpachapụ anya maka nsogbu dị mkpa sitere na njem ndị njem n'Africa.
Ndị ọkachamara na-ahụ maka njem nlegharị anya na ndị metụtara ya si n’ime Africa na mba ndị ọzọ jisiri ike na-ezukọta na-achọ ụzọ ha ga-esi nweta ahịa na ịkwalite mgbochi ndị na-eche njem nlegharị anya n’Africa iwepụta echiche dị mma iji lebara azịza na mmepe ha anya.
E mebere Tourlọ Ọrụ Njem Nleta Africa mgbe WTM gasịrị na London, na Eprel 11, 2019 na ihe omume dị egwu nke dabara World Market Market (WTM) Africa na Cape Town, South Africa.
atb ndị nnọchi anya mba angola
Ndị ozi nke njem na ndị isi nke njem njem na njem njem nke Africa na mba ụwa, yana ndị ngosi na ndị ọbịa sonyere na aterlọ ihe nkiri nke Cape Town International Convention Center iji sonye na Board of African Tourism Board, otu nzukọ na-arụ ọrụ iji hụ na Africa ghọrọ otu ndị njem nleta ebe njedebe.
Otu ndi otu ndi okacha amara nke mba uwa si na ndi njem nlere anya nke uwa gara emume a mgbe ha duziri nzuko nke ndi otu ndi njem nlere anya nke ndi Afrika, wee mee ka ndi ozo banyere ihe omume a na ndi otu banyere usoro kachasi nma iji kwalite mgbe ahu Afrika mere otu ebe njem nleta.
Kemgbe e guzobere ya, ATB chịkọtara ndị ọrụ njem na ndị njem njem ejikọtara ọnụ, ndị mgbasa ozi na ndị nwere mmasị na njem nlegharị anya iji kwalite ihe metụtara njem ndị Africa maka mmepe ebighi ebi nke anụ ọhịa bara ụba, akụkọ ihe mere eme, ọdịdị ala na ọdịnala nke mpaghara.
Nzukọ a na - eme kwa izu nke ATB Task Force haziri achịkọtala ndị otu Board ịkọwapụta ihe metụtara mmepe nke njem nlegharị anya nke ụlọ, mpaghara na nke mba ụwa n'oge ọrịa Covid-19 na mgbe ọrịa ahụ gachara.
N'etiti afọ a, Boardlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Njem Nleta Africa amalitela ịmalite ime njem enyemaka ndị njem, "olile anya olile anya" bụ ihe nzaghachi nye COVID-19 na mmetụta ya na ụlọ ọrụ ndị njem na Africa.
Ihe olile anya nke oru ngo a bu ihe edeputara n’uto niile banyere onodu aku na uba na mba Afrika, na enyere ndi njem aka. Oru ngo a gakwa enyere ndi mmadu aka ime ka uzo ha puta ma megharia uzo ha si choro dika obodo obula choro.
"Njem nlegharị anya bụ mpaghara akụ na ụba dị mkpa maka ọtụtụ mba, yana mmachi njem ndị etinyere n'ihi COVID-19 pụtara na ihe ka ọtụtụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị mba Africa niile ataala nnukwu ahụhụ na akụ na ụba ha", Onye isi oche ATB Mr. Cuthbert Ncube kwuru.
"Ebidola olile anya oru ngo iji bido njem iji wughachi njem na njem nleta n'Africa", Ncube kwuru.
ATB guzobere olile anya oru ngo a dika nzaghachi nye COVID-19 na ihe o metutara ulo oru ndi njem nlegharị anya n'Africa.
Usoro a, ozugbo emejuputara ga-etinye mba ọ bụla na ọnọdụ gbagoro maka mgbake akụ na ụba mgbe COVID-19 bụrụ ihe gara aga.
N'ime ime nke a, olile anya nke olile anya imeghachi ulo oru njem na njem nleta, mpaghara kacha metụta ma mebie site na ọgba aghara COVID19, dịka onye ndu akụ na ụba na ọ diri ọdịmma Afrịka niile.
“Anyị echepụtarala ya olile anya Project maka Africa na-egosi na anyị ahọrọla Okwukwe karịa Egwu, Olileanya karịa Obi nkoropụ, anyị ga-adịkwa mma na njem nleta ga-agbake iji dị ike karịa nke mbụ.
Onye oru ATB gbakwunyere na, “oru ngo a gunyere atumatu na ihe omume ndi gha eme ka mmadu nweghachi obi ike na njem gi n'ime Afrika.
Na nso nso a, ATB haziri wee nwee nzukọ ọgbakọ nke ndị minista na-ahụ maka njem na ndị nnọchi anya ha nwere mkparịta ụka maka ịkpụzi njem nlegharị anya n'Africa n'oge na mgbe ọrịa COVID-19 gachara.
Na mkparịta ụka ha kachasị ọhụrụ, ndị njem na njem nleta n'Africa ekwenyela ime ka mmepe nke njem nlegharị anya nke Africa dị ngwa. Nke a abụrụla ihe kacha mkpa na Mauritius ebe njem mba ụwa na-agbadata mgbe ntiwapụ nke COVID-19 n'isi afọ a.
ATB akpọkọtara ndị minista na-ahụ maka njem na ndị nnọchi anya ha si mba Africa gụnyere Angola, South Africa, Kenya, Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Cameroon, Eswatini na Tanzania na ndị ọzọ, iji wee kọwaa atụmatụ atumatu maka mmepe nke njem nlegharị anya nke obodo na mpaghara n'Africa.
Isi okwu ndị dị ugbu a n'okpuru ntinye ozi gụnyere nnwere onwe nke ndị Africa nọ na kọntinent ahụ site na ịhapụ mmachi visa n'etiti mba.
Onye isi oche ATB Maazị Cuthbert Ncube kwuru na Africa kwesịrị imeghe ndị nke ya mbara igwe. O kwuru na njikọ ikuku n'ime Africa ka bụ nnukwu nsogbu ndị Board na-ekwu maka idozi ugbu a.
"Goga ma ọ bụ na-eme njem n'ime Africa, onye njem ahụ gafere Middle East ma ọ bụ Europe iji jikọọ njem ahụ", Ncube kwuru.
“Anyi choro ikuku nke mepere emepe n’Africa, weghachite ahia ahia nke ndi njem anyi ma weghachite ala anyi nile”, Onye isi oche ATB kwuru.
Mmepe nke njem nlegharị anya nke Africa site na ịkwalite njem intra na Africa abụrụla nke a kpuchitere site na ichekwa ebe ọdịbendị ọdịnala Africa, ọdịbendị ọdịbendị na nke okpukpe.
ATB nọ na-akwado ịkwado "Akụ ndị dị oke egwu" n'Africa nke bụ anụ ọhịa Africa bụ nke na-eduga ndị njem nleta na Southern, Eastern na Central Africa.
Gorillas dị na Rwanda, Chimpanzees na Tanzania, Uganda na Rwanda so na ụdị anụ ọhịa pụrụ iche n'Africa na-adọta ọtụtụ ndị njem si na mpụga Africa, ewezuga ụdị anụ ọhịa ndị ọzọ bi na kọntinent ahụ.
N’ịghọta na ịkwado mkpọsa iji nyere ụmụaka Africa aka inweta nrọ ha na agụmakwụkwọ na ọdịmma dị ka ezigbo ndị isi maka echi, ndị African Tourism Board (ATB) nwere na June afọ a, haziri ezigbo mkparịta ụka na ndị ama ama ama ama iji kwurịta ikike ụmụaka na Africa.
N'iburu ọkọlọtọ nke "Childrenchebe Childrenmụaka na Ndị Ntorobịa n'Africa Development Tourism" ATB egosiputa ntinye ya iji gbalịa maka ikike agụmakwụkwọ na ọdịmma maka ụmụaka n'Africa site na Mkparịta ụka a na-eme n'etiti ọnwa June nke afọ a iji mee emume Internationalbọchị Mba Nile nke Africa Nwa.
Holland America Line: shipsgbọ mmiri abụọ si San ...
Mba ndị na-abụghị EU sonyere mkpebi EU machibidoro Belarusian ...
Njem njem ga-eme ka July 5 dịkwuo mfe ...